ကျမအပျိုစင်လေးပါ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on ကျမအပျိုစင်လေးပါ
သင်တန်းရောက်တော့ထိုင်စရာခုံလိုက်ရှာတယ်။နောက်ဆုံးမှာ ခုံတန်းမှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့သူအနားကျမသွားပြီး။ “ဟီး နောက်ကျသွားလို့အကိုထိုင်လို့ရလား” “ဟာ ရပါတယ်ဗျ၊ရပါတယ်ထိုင်ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရှင့်”ရည်ရည်မွန်မွန်ပြောနေပေမယ့်ကိုယ့်အာရုံကသင်တန်းနောက်ကျနေလို့သူ့ကိုဂရုမစိုက်မိဘူး။ထိုင်ပြီးမှ သူ့ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။နေလောင်အသားအရည်မို့ညိုနေပုံရပေမယ့်မူလအသားဖြူပုံရတယ်။ယောက်ျားပီသတဲ့မျက်နှာပေါက်ပဲ။ဝတယ်လို့ပြောစရာမရှိတဲ့ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်။စပို့ရှပ်နှင့်စတိုင်ဘောင်းဘီကျကျနနဝတ်ထားတယ်။သင်တန်းမှာစာတွေသင်ရတဲ့အချိန်တော့ သူ့ကိုအာရုံမထားမိပေမယ့်ကိုယ့်အနားမှာတစ်စိမ်းယောကျားလေးရှိတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကမလုံမလဲနှင့်ပေါ့။ခဏခဏချောင်းကြည့်မိတယ်။ဟီးကျမကလည်းအချောင်းသူကလည်းအကြည့်မှာနှစ်လိုဖွယ်အပြုံးနှင့်တချက်ပြုံးပြတယ်။ “အိုး ..”ကျမရင်ခုန်ပြီးရှက်သွားတယ်။ကျမအပျိုစင်လေးပါ။
တစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးမှာအရည်ပျော်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ကျမပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ် ပြီးတော့သင်တန်းဆရာပြတဲ့ဖက်ကိုအာရုံစိုက်ပေမယ့်ခုန်နေတဲ့ရင်ကို မဖုံးဖိနိုင်ဘူးလေ သင်တန်းခဏနားချိန်မှာတော့။ သူကကျမဖက်လှည့်ပြီး “ကျနော် ပြည့်ဖြိုးဦးပါ” “ဟုတ်ကဲ့အကိုကျမကပန်းသဇင်ပါ” “ဟုတ်ကဲ့နာမည်လေးကအရမ်းလှတယ်” “ဟင်းးးမုန့်ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်” “ဟားး ကျနော်မုန့်စားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး၊နာမည်နဲ့လူနှင့်လည်းအရမ်းလိုက်ဖက်တယ်အာ့ကြောင့်ပါ” “ခစ်ခစ် အရမ်းအပြောကောင်းတယ်” “အပြောမကောင်းရပါဘူးဗျာ။ကျနော်ကစစ်သားပါဗျာ” “ခစ် ခစ် ကိုကိုစစ်သားကြီးကအပြော၂ကောင်းတယ်’” “ဟားးဟားးတကယ်လားဗျာ၊ကျနော်တောင် မြောက်ချင်လာပြီ” “အောဒါနှင့် ဘယ်တပ်ကလဲ” “ကျနော်၆၇၇၇ ကလောတပ်နယ်မှာတာဝန်ကျပါတယ်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ဘာရာထူးလဲရှင့်” “ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ပါပဲ” “ဟုတ် ဗိုလ်ကြီး” “ဟာ မပန်းသဇင်ကလည်းဗျာ”။
ဟုတ် ..ဗိုလ်ကြီး ပြောပါ “ဟားးးးဟားးမပန်းသဇင်တော်တော်နောက်တယ်ဗျာ။ကိုပြည့်လို့ပဲခေါ်ပါ” “ဟုတ် ဗိုလ်ကြီးသဇင်လို့ခေါ်ပါ ဟီးး” သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်ကျတော့ညဘက်ရောက်နေပြီ။ “သဇင်ဘယ်ပြန်ရမလဲ” “သဇင်က ယုဇန ကြို၇န်မှာပါ၊ကိုပြည့်ကရော” “ကျနော်လည်းအဲဒြီ၇ဘက်ပြန်မှာပါ” “အောလမ်းကြောင်းတူတယ်ပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့ လာအတူတူပြန်ကြရအောင်သဇင်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်”္ကယုဇနကားတွေကအရမ်းကြပ်တယ်။သူအရင်ဆုံးတက်ပြီးနေရာဦးတယ်။ကျမတက်လာတော့”သဇင်..ဒီမှာနေရာရပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရှင့်” “အာသဇင်ကလည်းဗျာ”တလမ်းလုံးစကားတွေဟိုပြောဒီပြောပေါ့။ ကျမထင်ထားတာကစစ်သားဆိုတာစကားပြောပြတ်တယ်။သာမန်အရပ်သားတွေနှင့်မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။သူကဗဟုသုတလည်းစုံတယ်ရှင့်။ “ယုဇနရောက်တော့ သဇင် မှောင်နေပြီလာကြို မယ့်သူရှိလား” “မရှိဘူးကိုပြည့်” “ကျနော်လိုက်ပို့ပါရစေ” “အားနာတယ်ရှင် ကျမနေတာ A..Blockမှာဆိုတော့ဝေးတယ်” ။
ဟာ သဇင်ကလည်းစစ်သားတစ်ယောက်အနေနှင့် ဒီဟာလေးကနီးလွန်းနေတယ် “အားနာလို့ပါ” “ကျနော်တို့ကတနေ့လေးမိုင် အီကွေးမင့်အပြည့်နဲ့ပြေးနေကျ။ထရိန်နင်းရပြီးသား” “မလွယ်ဘူးနှော်အဲလိုပြေးနိုင်ဖို့” “အလေ့အကျင့်ရနေပါပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ ” ဒီလိုနဲ့ကျမနေတဲ့တိုက်ခန်းရှေ့အထိလိုက်ပို့တယ်” ကျမလည်းတိုက်ရှေ့ရောက်တော့ “ကိုပြည့်ပြန်တော့လေ သဇင်လည်းအပေါ်တက်တော့မယ်” ကျမလည်းကိုပြည့်ကိုတော်တော်ခင်သွားတယ် နောက်ရက်တွေလည်းသင်တန်းတက်ရင်းကိုပြည့်နဲ့ပဲအတူထိုင်ဖြစ်တာပေါ့။သူပဲလိုက်ပို့တယ်။ကျမလည်း ကျေနပ်မိတယ်။ တနေ့တော့ကိုပြည့်မျက်နှာမကောင်းဘူး “ကိုပြည့်ဘာဖြစ်လာလဲ” “အိမ်နဲ့အဆင်မပြောဖြစ်နေတယ်” “ဟင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ” “သဇင် ကိုပြည့်ကိုတစ်ခါမှမမေးဖူးဘူးနှော်” “ဘာမေးရမှာလဲကိုပြည့်” “ကျနော်အိမ်ထောင်ရှိမရှိပေါ့” “ကျမတို့ခင်တာအဲဒါတွေလိုလို့လားကိုပြည့်” ။
“ကျနော်အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်” “အော ဘာဖြစ်လဲကျမကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါ့မယ်” “အင်း ဗျာ သဇင် ၊ကျနော့်ကိုခွင့်လွတ်ပါ” “ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ” “ကျနော်သဇင် နဲ့အတွေ့နောက်ကျတယ်” “ရှင် ဘယ်လိုဘယ်လို” :ကျနော်မှာအိမ်ထောင်ရှိတယ်” “အော် ဟုတ်ကဲ့” “ကျနော်ကစစ်ဗိုလ်၊ မိန်းမဘက်ကချမ်းသာတယ်။ ရန်ကုန်မှာ သူတို့အိမ်လေ လမ်းမတော်က…… တိုက်ပဲ” “ဟုတ်ကဲ့ ” “သူကကျနော့်ကိုချစ်လို့ယူတာမှမဟုတ်တာ” “အာကိုပြည့်ကလဲ””ကျနော့်ရှေ့ရေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးယူတာလေ””အင်းး””စစ်သားကိုချစ်ရင်စစ်သားမယားလိုနေနိုင်မှပေါ့၊အခုသူကသူဌေးသမီးဆိုတော့တပ်မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာ။ကျနော်စိတ်ညစ်တယ်””အော်ကိုပြည့်ရယ်”ကျမတို့မိန်းမသားဆိုတာမိခင်စိတ်ရှိတယ်။မူလကတည်းကသနားတတ်တဲ့ကျမကိုပြည့်အပေါ်စာနာမိတယ်။သူရင်ဖွင့်သမျှကိုမျှဝေခံစားရင်းနှင့်ပဲသာယာမိတယ်။သူ့အပြောချိုချိုမှာကျမ အရည်ပျော်တာပေါ့ရှင် “သဇင် ” “ရှင့် ပြောကိုပြည့်”။
“ကျနော်သဇင် ကိုချစ်တယ်ဗျာ” “အာ ကိုပြည့်ကလဲ” “ကျနော်သိပါတယ်။ကျနော်လူမှု့ရေးဖောက်ဖျက်တာကို၊ကျနော်သဇင်အပေါ်အမှန်တကယ်ချစ်မိတာပါ” “အော် ….ကိုပြည့်ရယ်” “ကျနော့်ဘဝက သေမထူးနေမထူးဘဝပါ။ ကျနော်သဇင်နဲ့သာတွေ့ခွင့်ရမယ်မှန်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျနော်ဒီအိမ်ထောင်ရေးကိုယူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊တကယ်ဆိုကျနော်ကမလိုက်ဖက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုရွေးချယ်မိခဲ့တာပါ။” “အော် ကိုပြည့်ရယ်” “သဇင် စဉ်းစားကြည့်လေ ကိုလိုဗိုလ်ကြီဘဝပဲ ရှိသေးတဲ့လူကိုသူ့မိဘတွေကလူရာမသွင်းဘူး တပ်ထဲမှာအကောင်ဖြစ်ပေမယ့်အိမ်ရောက်ရင်ကျနော့်အခန်းထဲဝင်ပြီးဘာမှမပြောတာ။ကျနော်အရမ်းသိမ်ငယ်တယ်” :အော ကိုပြည့်ရယ်” “သဇင်နဲ့တွေ့မှစိတ်ချမ်းသာရတဲ့ဘဝပါ” “အာ ကိုပြည့်” “ကျနော့်ကိုစာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ သဇင်ကိုဒီရင်ဘတ်ကြီးထဲကချစ်မိတာဆန်းလားဗျာ” “အင်း” ကိုပြည့်လေသဇင့်လက်ကိုကိုင်ပြီးသူ့ရင်ဘတ်မှာကပ်ထားတယ်။
အိန်ထောင်ရှင်မို့လို့လားမသိဘူးလက်ရဲဇက်ရဲနိုင်လွန်းတယ်။ ဒီအပျိစင့်ရင်မှာတဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီ” “အာ ကိုပြည့် လွှတ်ပါ” “ကျနော်အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ။ကျနော့်ကိုစိတ်ချမ်းသာခွင့်လေးတော့ပေးပါ” “သဇင်စဉ်းစားပါရစေကိုပြည့်” တကယ်တော့သဇင်မစဉ်းစားမိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အပေါ်ကြင်နာတတ်တဲ့လူမျိုးကိုသဇင်မတွေ့ဖူးသေးတော့ရင်ခုန်ရင်အချစ်ပဲထင်ခဲ့တယ်။တကယ်လည်းချစ်သွားတယ်လေ””သင်တန်းရက်တွေဟိုလည်ဒီလည်အတူတူပေါ့၊သဇဧင်လည်းပျော်နေတယ်၊ကိုပြည့်ကတကယ့်ကိုလက်ရဲဇက်ရဲပဲဖက်တာနမ်းတာအရမ်းကျွမ်း။သဇင်မှာရင်တဖိုဖိုနဲ့။နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းရင်တောင်သဇင်မှာကျောထဲစိမ့်နေအောင်ခံစားရတယ်။အင်းမရှက်မကြောက်ပြောရရင်ပိပိထဲအရည်တွေစိမ့်ထွက်နေတာ။ လည်တိုင်တွေနမ်းရင်တော့အရည်တွေကပင်တီတောင်ဖောက်ထွက်တတ်လို့သဇင့်မှာနေစဉ်အမျိုးသမီးသုံးအခုအခံတွေပါခံထားရတယ်” သူကလည်းအိမ်မပြန်ဘူးလေ။
သဇင်ကိုအိန်လိုက်ပို့တဲ့နေ့တွေဆိုသဇင်မှာရင်ထဲမောဟိုက်နေသလိုခံစားရတယ်။သင်တန်းပြီးတဲ့တနေ့မှာ “သဇင် ကိုပြည့်တပ်ထဲပြန်သွားရမယ်”သဇင်ဝမ်းနဲသလိုဆွေးမြေ့သွားသလိုခံစားရပြီးကိုပြည့်ကို ဖက်ထားမိတယ် “အင်း ကိုအလွမ်းရတော့မှာပဲကွာ” “တော်ပါ ဟိုရောက်ရင်သဇင့်ကိုမေ့သွားမှာပဲ” “ဘယ်လို့မှမမေ့ပါဘူးသဇင် ကိုတို့အတူတူနေရအောင်” “ကိုပြည့်သဇင်ကြောက်တယ်” “မကြောက်ပါနှင့်သဇင်ရယ်ချစ်သူတို့ဘဝတစ်ခါတဘေ ချစ်ကြတဲ့ဥစ္စာ” သဇင်ကိုပြည့်ကိုသနားလည်းသနားချစ်မိတယ် “အင်းပါ ကိုပြည့်ရယ်” ကိုပြည့်Taxi ငှားပြီး”လာသဇင်ကိုတို့သွားကြမယ်၊သဇင်ကားပေါ်တက်ခဲ့ပေမယ့်ရင်ထဲမှာချီတုံချတုံနဲ့ကြောက်သလိုရွံသလိုခံစားရတယ်။ကိုပြည့်ကအလိုက်သိစွာပဲသဇင်ကိုရင်ခ့င်ထဲပွေ့ထားကာ”အရမ်းချစ်တယ်သဇင်ရယ်””သဇင်လည်းအတူတူပါပဲကွယ်”သဇင်ကိုပြည့်ခေါ်ရာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ကိုပြည့်ကဟိုတယ်တစ်ခုကိုပဲခေါ်တာပါ။
ဟိုတယ်ထဲဝင်ရမှာမျက်နှာတော့ပူတယ်။ဒါပေမယ့်ကားကဟိုတယ်ထဲအထိဝင်လို့ရတယ်။နောက်ကနေပြီးအပေါ်တက်ရတာမို့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူး။ “လာ သဇင်ကိုကိုနဲ့လိုက်ခဲ့” “ထူးဆန်းတာက ဟိုတယ် ကဝန်ထမ်းတွေနှင့်မတွေ့တာပဲ။ “ကိုပြည့်ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘူးနှော်” “အင်း” ကိုပြည့်ကသူ့ဘောင်းဘီအိပ်ထဲကသော့ထုတ်ပြီးအခန်းတံခါးဖွင့်မှ သတိထားမိတယ်” “ကြည့်စမ်းလူလည်ကြီး တစ်ခါတည်းအခန်းငှားထားတာပဲ” “ဟုတ်တယ်သဇင်မဟုတ်ရင်အရှေ့ကReceptionကိုဖြတ်ရမှာလေ” “ဟင်း တော်တော်လည်တယ်” “ဟဲဟဲ ချစ်လို့ပါကွာ” “ဟင်း သဇင်ကြောက်နေတယ်ကိုပြည့်””မကြောက်နဲ့သဇင်ရယ်၊ဒီအထိတောင်ရောက်ပြီ””ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမယ့်”သဇင်စကားကရှေ့မရောက်တော့ဘူးကိုပြည့်ကကျမကိုဖက်ပြီး နမ်းတော့တာပဲ သူ့အနမ်းကပိုပြီးရင်ခုန်စေတယ်။ ကျမစိတ်ထဲမှာငါ့တော့ကိုပြည့်နဲ့အတူနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကြီးစိုးပြီး ရင်ထဲတသိမ့်သိမ်တုန်ကာပိပိထဲကတောင်လှုပ်လာတယ်။
ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီး “အင်းးဟင်းးဟင်းကိုပြည့် ရယ် အဝတ်အစားတွေကြေကုန်ပါ့မယ်” “ကိုပြည့်ချွတ်ပေးမယ်ကွာ” “ဟင်းဟင်းရတယ် သဇင်ဘာသာချွတ်ပါ့မယ်” “အင်းပါ သဇင်ရယ်”သဇင်ရေချိုးလခန်းဖက်သွားပြီးအဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်သေးတယ်။ပြီးမှသဘက်တထည်ပတ်ပြီးအိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လိုက်တယ်။ကိုပြည့်ကအဝတ်အစားတွေချွတ် ပြီးပြီ။သူ့လီးကြီးကမတ်ထောင်နေတာ။ဒါပေ မယ့်သူ့လီးကအကြီးကြီးမဟုတ်ဘူး” “အာ ကိုပြည့်ကလည်းရှက်စရာကြီး” “ဟဲ အဲဒါဆိုဟိုဘက်လှည့်နေ” “ကိုပြည့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။သဇင်ကတော့အိပ်ရမှာလားဘာလုပ်ရ မှန်းမသိတော့ကုတင်အောက်ခြေချရင်းထိုင်နေတာ။ “ချစ်တယ်သဇင်ရယ်” “ကိုပြည့်ရယ်အတူတူပါပဲ” ကိုပြည့်ကဘေးကထိုင်ကာကျမကိုဖက်နမ်းတော့ကျမလည်းစိတ်လိုလက်ရပြန်ပြီးအနမ်းနှင့်တုန့်ပြန်လိုက်တာပေါ့။ ကိုပြည့်ကသဇင်လည်တိုင်တွေနမ်းရင်းနဲ့သဘက်ကြီးခွာလိုက်တယ်။
အသားစိုင်တွေကအဝတ်မရှိတော့ပူးကပ်သွားတဲ့အခါကျမစိတ်တွေပိုပြီးနိုးကြားလာတော့တယ်။ ကိုပြည့်လေသဇင့်နို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့တယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာကျမအပျိုရိုင်းလေးတစ်ယောက်စိတ်တွေအရမ်းထနေတယ်။ မိန်းမရဖူးသူဖြစ်လို့မိန်းမကျမ်းကြေတယ်ပြောရမယ်။သူနို့စို့ပေးရုံနှင့်ပိပိထဲကအရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ထွက်လာပြီးနေရတာတမျိုးကြီးကျမစိတ်တွေရောကိုယ်ရောလေထဲလွင့်မျောနေသလိုပါပဲ။စိတ်ဆွေမရိုးမယွဖြစ်လာပြီးအသံတွေအလိုအလျောက်ထွက်မိတယ်။နို့စို့တာကလည်းကလေးတွေနို့စို့သလိုနဲ့မတူဘူး၊၊လျှာဖျားနှင့်မွှေတယ်။နို့အုံကြီးကိုငုံစို့တယ်။နို့သီးခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလျှာနှင့်ထိုးတယ်။”အာ့…..အင့်ဟဟင့်အင်းးအင်း”နို့တွေစို့ရင်းကျမပေါင်ကြားထဲလက်ကြီးနှင့်နှိုက်ပြီးပိပိလေးကိုပွတ်တော့သဇင်ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထလာတယ်။အစေ့ကလေးကိုလက်နှင့်ထိမိတော့ကျင်ကနဲတွေ့ပြီးတွန့်သွားသေးတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့အထိအတွေ့မှာကျမနစ်မြောနေသလိုပါပဲ။ကိုပြည့်ကသဇင့်အစေ့ကလေးကိုဖြေးဖြေးလေးပွတ်တယ်။ “အာ့ ကိုပြည့် ကျင်တယ် အာ့ဟင့်အင့်” အရည်တွေအရမ်းထွက်သွားတယ်။ကိုပြည့်ကအကွဲကြောင်းထဲလက်တစ်ချောင်းသွင်းပြီး မွှေသေးတယ်။ “အာ့ကိုပြည့် အာ့ ရှီးရှီးးရှီးအိုးးး” လူလည်းတဆတ်ဆတ်တုန်နေသလိုခံစားရပြီး လေထဲလွင့်နေသလိုပါပဲ။ “ကိုပြည့်ကနို့စို့ရပ်လိုက်တော့ကျမနို့သီးခေါင်းလေတွေထောင်ထနေသလိုပဲ။သူရပ်ပြီးမှ ကျမ ပေါင်ကိုကားလိုက်တယ်။သူလိုးတော့မယ်လို့ ကျမထင်မိပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ကာနေလိုက်တယ် “ပြွတ်.. ပြွတ်…ပြွတ်” “အာ့ အမလေးး အာ့ လေထဲမြောက်တက်သွားသလိုပါပဲ။အိပ်ရာ ပေါ်ကခါးတောင်ကော့တက်သွားတယ်။ဘယ်လိုခံစားချက်မှန်းမသိဘူးတမျိုးကြီးမို့သဇင် အိပ်ရာခင်းတွေကိုတဖက်တချက်လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်မိတာပါ။ ကျမထင်သလိုကျမပိပိထဲလီးဝင် တာမဟုတ်ပဲကျမအစေ့လေးကိုကိုပြည့်ကတ ပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေတာပါ”။
“အာ့ ကိုပြည့်….ငရဲကြီးပါ့မယ် ကိုပြည့်ရယ်” “မကြီးပါဘူးသဇင်ရယ်၊ငြိမ်ငြိမ်လေးသာနေပါ”ကိုပြည့်လေကျမပိပိအကွဲကြောင်းတလျောက်လျှာအပြားလိုက်လုပ်ပြီးယက်လိုက်တာ။အောက်ကနေအပေါ်ကိုပင့်တင်ပြီးယက်တော့အရည်တွေကသူ့လျှာမှာကပ်ပါလာတယ်။လျှာသိမ်းပြီးမြိုချတာကိုတွေ့ပြီးရင်ထဲသိမ့်ကနဲခံစားမိတယ်။ “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အား အင့်ဟင်းးဟင်းးအားးး” ပိပိအကွဲကြောင်းထဲလျှကိုဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင်စုချွန်ပြီးထိုတော့သဇင်ခါးကော့ပြီး “အာ့ အင်းဟင်းးးဟင်းးး ကိုပြည့်သဇင်မနေနိုင်တော့ဘူးးး အာ့ အင့်…ဟင့် တော်ပါတော့ ဟင့်အင့်အင်း” မခံနိုင်တော့ဘူးလေကိုပြည့်ကိုတားယူရတယ်။ “သဇင်ကို့ကိုလုပ်ပေးပါလား” “ဟင့်အင်းကိုပြည့် သဇင်မလုပ်ရဲဘူး” “လုပ်ပေးပါလားသဇင်ရယ်” “ဟင့်အင်း ကိုပြည့်…သဇင်အခုမလုပ်ရဲသေးဘူးကွာ” “ဟုတ် နောက်အခေါက်ဆိုလုပ်ပေးနှော်” “အင်းပါကိုပြည့်ရယ်” ကိုပြည့်လေ ဒူးထောက်ပြီး ကျမပေါင်ကြားထဲဝင်ကာပိပိအခေါင်းထဲလီး ကိုတေ့ပြီးစလိုးတယ်။
အပျိုစစ်စစ်မို့လီးဝင်လာမှာကြောက်ပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ် “ဗျစ် ဖျစ် ဖျစ် ဖောက်” “အာ့ အမလေး၊သေပြီ” သဇင်သတိထားမိတာကလီးကအရမ်းမကြီးပေမယ့်အဖုတ်တင်းတင်းလေးဝင်သွားတော့ကိုပြည့်လီးကြောင့်သဇင့်အပျိုအမှေးပါးပေါက်သွားရပြီဆိုတာပါပဲတင်းဆို့ဆို့အရသာရယ်နာကျင်မှု့တွေရယ်ပေါင်းပြီးခံစားရတယ်။ “အာ့…ကိုပြည့်…သဇင်နာတယ်” “ခဏလေးပါသဇင်ရယ်..နှော်” “အင်းပါ ကိုပြည့်ရယ် ဖြေးဖြေးလေးပဲလုပ်နှော် “အင်းပါသဇင် တော်ကြာကောင်းသွားမှာပါ” “ဟင့်အင်း အခုတော့နာတာပဲသိတယ်” ကိုပြည့် သဇင့်နို့ကိုပြန်ပြီးကုန်းစို့ပြီးသဇင်နာကျင်မှု့သက်သာစေပြီးဖီလ်းရှိစေဖို့လုပ်လိုက်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့အင်းးအင်းးဟင်းးးးးးးးး” ကာမစိတ်ကနာကျင်မှု့ကြောင့်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကပြန်နိုးထလာတယ်။ “အင့်…ဟင်းးးဟင်းးးး ကိုပြည့် ” သဇင်ကိုပြည့်ကျောကိုအတင်းဖက်ရင်း ဖိချမိတယ်။အရမ်းလည်းကောင်းလာပြီလေ။
“အာ့ ကိုပြည့် ” ကိုပြည့်လည်းသဇင်ဖီးအပြည့်ရလာမှန်းသိတော့ တချက်ချင်းဆောင့်ရကနေအရှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်လိုးတော့တယ်။ “ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဗျစ် ဗြစ် ဘွတ်….” “အာ့အင့်ဟင်းးဟင်းးးးအင်းးး’ “သဇင်လည်းအရမ်းကောင်းလာပြီ။အခန်းထဲမှာလိုသံတဖွတ်ဖွတ်နှင့်ဥရိုက်သံတဖတ်ဖတ် မြည်နေပြီလေ။သဇင့်အော်ညည်းသံနှင့်ကို ပြည့်မာန်သွင်းသံကလည်းအခန်းထဲဆူနေပြီးရေမြုပ်မွေ့ရာကလည်းတချက်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်းအိကနဲအိကနဲနှင့်မို့လိုးရတာလည်းအရမ်းကောင်းနေတယ်။တနေ့လေးမိုင်ပြေးပြီး၊ပါးနှင့်မြေကြီးကပ်နေအောင်ဒိုက်ထိုးတဲ့အ လေ့အကျင့်ရှိသူမို့ကိုပြည့်ကသက်လုံကောင်း ကောင်းနှင့်လိုးနိုင်တယ်။ကြာကြာလေးလည်းလိုးနိုင်တာကြောင့်သဇင့်မှာပထမအကြိမ်မှာပဲ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးဖန်းး” “အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး အီးးးး” “ကို့ပြည့် အားးဟားး ကို့ပြည့်အီး ..ဘယ်လိုကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးး” “သဇင် ပြီးတော့မလား”။
“အားးမသိဘူးး အူးးအရည်တွေ ထွက်နေသလိုကြီး အားးရှီးရှီးးး” သဇင်တကိုယ်လုံးအကြောတွေလှုပ်ရှားပြီး ပိပိထဲကအရမ်းလှုပ်ရှားပြီးကိုပြည့်လီးကို ညှစ်ထားမိသလိုပါပဲ. လိုးဖူးတာဒီတကြိမ်ဆိုပေမယ့်တကြိမ်ဆိုသ လောက်အရသာရှိလှတယ်။ သဇင်ပြီးပေမယ့်ကိုပြည့်ကတော့ဆက်လိုးနေတယ်။သဇင်နို့ကိုဆက်စို့ပြီးသဇင့်ကာမစိတ်တွေပြန်ထလာဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။သဇင်မှာပထမအကြိမ်ကပြီးဆုံးသွားတော့အားကုန်သွားသလ်ုသဇင်ဖြစ်ပေမယ့်ကိုပြည့်ရဲ့နို့စို့မှု့နှင့်အဆက်မပြတ်လိုးမှု့ကြောင့်ဒုတိယအကြိမ် ကာမစိတ်ကကြွလာပြန်တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးဖန်းး” “အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး အီးးးး”သဇင်ဒီတကြိမ်မှာပထမထက်ပိုပြီးအော် ညည်းတယ်။အရသာလည်းပိုရှိတယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးးးးးး” “အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး ” ကို့ပြည့်ကအရမ်းကိုလိုးနိုင်တယ်” “သဇင် ကုန်းပေးပါ လားကွာ” ဒီတကြိမ်သဇင် မငြင်းတော့ဘူး။
အရမ်းလည်းစိတ်ကြွနေပြီလေ” သဇင်မြန်မြန်ပဲလူးလဲထပြီးကုန်းလိုက်တယ် ကိုပြည့်လည်းသဇင့်နောက်ကနေဒူးကွေးပြီး သဇင့်နို့တွေကိုဆွဲကာ လိုးလိုက်တယ်။လူပျိုမဟုတ်တဲ့ကိုပြည့်ကအထာသိပ်ကျွမ်းကျင်တော့သဇင့်ကိုပြည့်လိုးချက်အောက်မှာအရမ်းကိုစိတ်ပါပြီးတအင့်အင့်တအားအားဖြစ်နေတော့တာပဲ။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးးးးးး” “အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး ” ဒုတိယအကြိမ်သဇင်ပြီးတော့မယ် “အာ့းးးး ဖြစ်လာပြီ၊ဖြစ်လာပြီကိုပြည့်” “သဇင်ပြီးတော့မလား” “အင်းးးကိုပြည့်လည်းပြီးတော့မယ်” “”ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးးးးးး” “အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး သဇင်ပြီးတော့မယ် အားးရှီးရှီး” “””ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဗျိ ဗျိ ဘွတ် ဖန်းးးးးးး” “”အာ့ အင်းးးဟင်းးရှီးရှီးး အိုးး ပြီးပြီး ၊ပြီးပြီအား” သဇင်ပြီးဆုံးသလိုကိုပြည့်လည်းပြီးသွားတယ် ပူနွေးနွေးသုတ်တွေသဇင့်ပိပိအခေါင်းထဲဝင်လာပြီးသားအိမ်နံရံတွေကိုပန်းထည့်လိုက်တာ ကြောင့်သဇင့်မှာအရသာအရမ်းရှိသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။
“အားးးးကောင်းလိုက်တာသဇင်ရယ်””ဟင်းကိုပြည့်ကသာကောင်းနေတာဒီမှာကျိမ်းစပ်နေတာပဲ၊လမ်းတောင်ဘယ်လိုလျောက်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ပေါင်တွင်းကြောတွေလည်းအောင့်နေတာပဲ” “ဟီး လိုးရတာအရမ်းကောင်းတယ်စေးပိုင်နေတာပဲသဇင်ရယ်” “တော်ပြီနောက်မလုပ်နှင့်တော့၊ကိုပြည့်မှာ လည်းအိမ်ထောင်ရှိတော့ကျေနပ်တော့နှော်””ဟာကွသဇင်ကလည်းကွာ””ကိုသဇင်ကိုမခွဲနိုင်ဘူး”ကိုပြည့်ကသဇင်ကိုဖက်ပြီးဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေးပြောတော့သဇင်ရင်ထဲလှိုက်ကနဲဖြစ်ပြီး ကိုပြည့်ကိုလည်းသနားမိပြန်တယ်။ “အာ ကိုပြည့်ရယ်” နောက်တကြိမ်ထပြီးကိုပြည့်လိုးမယ်လုပ်တော့ “အာကိုပြည့်တော်ပြီကွာ သဇင် အခုတောင်တော်တော်နာနေပြီ” “သဇင်ကလည်းကွာ ကိုပြည့်အားမရသေးဘူး” “နောက်တစ်ခေါက်မှလုပ်တော့နှော်ကိုပြည့်” “အင်းပါကွာ သဇင်သဘောပါကွာ” အဲနေ့ကပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကိုပြည့်ကလမ်းမှာအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးရယ်တားဆေးရယ်ဝင်ဝယ်ပေးတယ်။
အိမ်ရှေ့မရောက်ခင်ပဲ “ကိုပြည့်ဒီကဆင်းတော့ကွာ” “အမ် ဘာဖြစ်လို့လဲ..သဇင်” “ဒီပုံကြီးနှင့်အိမ်ပြန်ရင်လူတွေရိပ်မိမယ်။ဒီမှာလမ်းလျောက်ရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ “အင်းပါသဇင်ရယ်။ကိုပြည့်အိမ်နားမရောက်ခင်ကားပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။အိမ်ရှေ့အထိတက်စီကားကိုမောင်းခိုင်းပြီး။သဇင်ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးတိုက်ပေါ်တက်တယ်။ဘယ်တုန်းကမှလက်ရန်းကိုင်မတက်ခဲ့တဲ့သဇင်အခုတော့လက်ရမ်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးတက်ခဲ့ရ တော့တယ်။ သဇင်လည်းအိမ်ရောက်တော့တကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲနေလို့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလေးသောက်ပြီးအိပ်ရတော့တာပေါ။ သဇင်နှင့်သူ သင်တန်းပြီးသွားတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူး။ခုခေတ်လိုဖုန်းမပေါတဲ့အတွက်VZOလေးနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ရတာပေါ့။အခုဆိုအရင်ထက်ပိုပြီးရင်းနီးလာပြီ။အရှက်နည်းလာတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့လိုးပြီးကြပြီလေ။တခါတလေလည်းchattingလေးလုပ်ရင်းအရင်လုပ်ခဲ့တာလေးသတိရတာပေါ့။
တစ်ခုရှိတယ်သူကသူ့အိမ်ထောင်ရေးမသာယာတာပဲပြောတယ်။သူဌေးသမီးယူထားလို့သူ့လိုချင်တာတွေမရဘူးပေါ့တဲ့။သဇင်သိတာပေါ့သူဘာလိုချင်နေလဲဆိုတာကိုလေ။သူတပ်ပြန်သွားပြီးသုံးလလောက်အကြာမှာသူ့ဆီကအဆက်အသွယ်ရတယ်။သူရန်ကုန်လာမှာတဲ့။သဇင်အလိုလိုနေရင်းရင်ခုန်နေတာ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သဧင်ရဲ့ချစ်ဦးသူပဲ။သူ့မိန်းမရှိလဲသဇင်သူ့ကိုချစ်မိနေပြီ။မိန်းကလေးဆိုတာတကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆပ်ဖို့အသင့်ပဲလေ။တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ လင်မယားလိုနေပြီးပြီဆိုတော့သဇင့်အတွက်ငိပ်မထူးဆန်းတော့ဘူး၊လိုးဖူးပြီးပြီပဲနောက်ထပ်လိုးကြမှာတော့မဆန်းတော့ဘူးဧလ။မလိုးဖူးခင်သာကြောက်တာပါလိုးဖူးပြီးလီးအရသာသိသွားတဲ့ကျမလိုးရမှာကိုတကယ်မကြောက်တာ။ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအရသာကရင်ခုန်မှု့နှင့် အရမ်းကောင်းတာလေ။သူရောက်လာတော့SE sloonကားလေးနှင့် လာခေါ်တယ်။
အခုတော့သူဗိုလ်မှူးဖြစ်နေပြီ “သဇင် ကိုအရမ်းလွမ်းတယ်” “သဇင်လည်းလွမ်းနေတာပဲကိုပြည့်ရယ်” “သဇင်ကိုတို့ဟိုတယ်သွားမယ်” အင်းလိုက်ခဲ့မှာပေါ့ကိုပြည့်”ကျမတို့ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျမရှက်မနေတော့ဘူး။ရှက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ပဲအချိန်လေးရှိတုန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲစလိုက်တယ်။သူလည်းအဝတ်အစားတွေချွတ်ကိုယ်လည်းအဝတ်အစားတွေချွတ်ပဲ”အင်းသူ့လီကတဆတ်ဆတ်တောင်နေပြီ။ကျမသူ့လီး ကြည့်ပြီးအသဲတွေယားလာသလို အဖုတ်လည်းယားလာတယ်။အရည်တွေတောင်စို့နေပြီ။ကိုပြည့်ကကျမကိုနမ်းပြီး နို့တွေကိုကိုင်တယ်။ကျမလည်းသူ့လိးကိုကိုင်ပြီးဂွင်းထုသလိုလုပ်ပေးတယ်။သူကနို့စို့ပြီးကျမအဖုတ်ကိုယက်တယ်။ဒီအရသာကလည်းကောင်းတယ်။သူအရမ်းမှုတ်တတ်တယ်။အရင်လိုကြောက်ရွံ့မနေတော့သူ့မှုတ်တာနဲ့တကြိမ်ပြီးတယ်။ကျမပြီးသွားတော့သူရပ်လိုက်ပြီးသဇင်ကိုဆွဲထူတယ်။
သဇင့်မျက်နှာရှေ့သူ့လီးကိုထားပေးတော့သဇင်အလိုက်သိရပြီ”သူ့လီးညိုညိုကိုတချက်လေးကိုက်ပြီးသူ့မျက်နှာလေးကိုလှမ်းကြည့်တယ်။သူမေးဆတ်ပြတယ်။စုပ်ပေးဆိုတဲ့သဘောပါ။သဇင်မဝံ့အရဲလေးစုပ်ပြည့်တယ်။အနံ့မရဘူး၊သူကအရေခွံဖုံးနေတဲ့သူ့လီးကိုအရေခွံနောက်ဆုတ်ပြီးပါးစပ်ထဲထိုးထည့်တယ်။အရေကြည်ချွဲချွဲလေးတွေနှင့်စိုနေတဲ့လီးကို သဇင်ငုံစုပ်လိုက်တယ်။အရသာလေးကတစ်မျိုးကြီးပဲ။သာမန်အသားစုပ်သလိုမဟုတ်ဘူး။ထုံထုံလေး အရသာငံကျိကျိလေးပါ။စုပ်ကြည့် တာအရသာကောင်းလို့တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်စုပ်ပေးလိုက်တယ်။စုပ်လိုက်မှအရေကြည်တွေကပိုထွက်တယ်။ထွေးမထုတ်မိဘဲသဇင်မြိုချရင်းစုပ်ပေးတယ်။ကိုပြည့်လည်းတအားအား ညည်းတယ်။သူညည်းလေစိတ်ပိုပါလေသဇင်ပိုစုပ်မိတယ်။ “သဇင်ဒစ်ကိုလျှာနှင့်ယက်ပေး” ကျမလည်းသူ့လီးဒစ်ကိုလျှာနှင့်ယက်လိုက်လီးကိုစုပ်လိုက်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ :”သဇင်ဂွေးဥလေးပါစုပ်ပေးလေ” “အမ် ဂွေးဥလည်းစုပ်ရလား”။
“အင်းအဲဒါလည်းကောင်းတယ်ပြောတယ်” သဇင်လီးစုပ်ရင်းဂွေယဥတွေကို ဖွဖွလေးကိုင်ကြည့်ပြီးသူ့ဂွေးဥတွေကိုတလှည့်စီစုပ်ပေးလိုက်တော့။ “အားးးး ကောင်းလိုက်တာသဇင်ရာလိုးချင်ပြီ’” “ဟုတ်ကိုပြည့်လိုးလေ” သဇင်တောင်လိုးဆိုတဲ့စကားပိုရဲရဲပြောထွက်မိတော့ရှက်မိတယ်” “သဇင်ကုတင်ပေါ်ကုန်းကွာ” သူ့အလိုလိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကုတင်စောင်းပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီး မျက်နှာအိပ်ရာပေါ်ကပ်ထားလိုက်တယ်။ကိုပြည့်ကကုတင်အောက်ကနေပြီးသဇင်ခါးကိုလက်တဖက်နဲ့ကိုင်ကာကျန်တဖက်ကလီးကိုကိုင် ပြီးသဇင့်အဖူတ်ကိုတော့ပြီးလိုးလိုက်တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်ဖွတ်” “အာ့အင်းးးဟင်းးးဟင်းးးး..” လီးနှင့်အဖုတ်တွေ့သံတဖွတ်ဖွတ်တဘွတ်ဘွတ်နဲ့အရမ်းကောင်းနေတယ်။သဇင့်အော်ညည်းသံကအလိုအလျောက်ပဲထွက်တယ်။ “”ဗြစ် ဗျစ် ဘွတ်ဖတ်ဖတ် ..ဖန်းဖန်းးဖန်း” “အားအိုး အာ့ အင်းဟင်း….းဟင်း” သူ့လိုးချက်ကမြန်လေသဇင်အရမ်းကောင်းလေဖြစ်နေတာပေါ့။
အားးးကောင်းနေပြီ ကိုပြည့် အား…..အား…..အရမ်းကောင်းတယ် အားပြီးပြီ။ပြီးပြီ” သဇင်ပြီးသွားတယ်။ “အားကောင်းလိုက်တာကိုပြည့်ရေ ” “သဇင် ကို..မပြီးသေးဘူးကွာ” “အင်းပါကိုပြ ည့်ခဏနားရအောင်လေ” “အင်းပါ” သဇင်ခါးညောင်းသွားတယ်။သူ့ဆောင့်လိုးအားကိူတောင့်ခံနေရလို့ပါ။ ခဏတော့ခါးဆန့်ပြီးအညောင်းဖြေတယ်။ ကိုပြည့်ကမတ်တပ်ကြီးရပ်လျက်ပေါ့ “သဇင်ပြန်စရအောင်ကွာ” “အင်းစချင်စလေ” “သဇင် ကို့လီးကိုစုပ်ပေးဦးကွာ” “အင်းပါကိုပြည့်” “သူ့လီးမှာ သဇင့်အဖုတ်ကထွက်တဲ့အရည်တွေ သူ့လီးကအရည်တွေနှင်ရွှဲစိုနေတဲ့လီးကိုသဇင်တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်စုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ ခဏနားနာချိန်ညိုးနေသလိုဖြစ်နေတဲ့ ကိုပြည့်လီးကပြန်ပြီးမာတောင်လာပြန်တော့ “သဇင်ကို့အပေါ်ကတက်ပေးပါလား” “အမ် ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ” “ကို့လီးအပေါ်ခွထိုင်လိုက်လေ” “အင်းပါ ကိုပြည့်” သဇင်ကိုပြည့်အပေါ်ခွထိုင်ပြီး။ကိုပြည့်လီးကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ထဲတေ့ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။
အာ့ ..အိုး သဇင်အပေါ်ကနေပြီးဆောင့်လိုးချတယ်။အဖုတ်ကသူဆီးခုံထိပြီး တဖန်းဖန်းမြည်နေတာပေါ့ အာ့အင်းဟင်းးဟင်းးးး” အချက်လေးငါးခြောက်ဆယ်လောက်ဆောင့်ချပြီးဒူးကမခံနိုင်လို့လီးကိုအဖုတ်ထဲမှာထားရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လိုးလိုက်တယ်။ဒီအကြိမ်တော့ကိုပြည့်ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီး လိုးလိုက်တယ်။အလေ့အကျင့်မရှိတဲ့အတွက် ကြာကြာမလိုးနိုင်ဘူးလေ။ “အားကိုပြည့်အရမ်းညောင်းတယ်ကွာ” “အဲဒါဆို ရင် သဇင်ကုတင်စောင်းမှာဒူးကွေးပြီးစောင်းအိပ်ပေး” “သဇင်လည်းကုတင်စောင်းဖင်ပေးပြီး စောာင်းလှဲကာအိပ်လိုက်တယ်။ ကိုပြည့်ကုတင်အောက်ကနေပြီးတော့အဖုတ်ထဲလီးသွင်းပြီးလိုးတော့တာပဲ။ဒီအခါမှာတော့တော်တော်အရသာရှိပါတယ်။သူ့လီးကသေးတယ်စောင်းအိပ်ပေးတော့သူ့လီးကအရမ်းကြပ်နေသလိုဖြစ်ပြီးသဇင်အရမ်းကောင်းနေတယ်။”””ဗြစ် ဗျစ် ဘွတ်ဖတ်ဖတ် ..ဖန်းဖန်းးဖန်း “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်ဖွတ်” ။
အားးးအရမ်းကောင်းနေပြီ ကိုပြည့် အားးး” “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်ဖွတ်” “အာ့အင်းးဟင်းးရှီး ရှီး အာ့ ဟားးဟားးးရှီး” တကယ်ပဲလီးကြပ်ကြပ်ကလေးတိုးဝင်လိုက်တိုးထွက်လိုက်နဲ့အရမ်းကောင်းတယ် “အားကောင်းလိုက်တာကိုပြည့်ရာ” ဗစ် ဗျစ် ဘွတ်ဖတ်ဖတ် ..ဖန်းဖန်းးဖန်း” အာ့အင်းးဟင်းးရှီး ရှီး အာ့ ဟားးဟားးးရှီး” “အားပြီးတော့မယ် အားးဟားးပြီးပြီ မြန်မြန်လိုးပေး” “””ဗြစ် ဗျစ် ဘွတ်ဖတ်ဖတ် ..ဖန်းဖန်းးဖန်း” ကိုပြည့်လည်းအသံတရှူးရှူးတရှဲရှဲမြည်လာပြိး “အားသဇင်ကိုလည်းပြီးတော့မယ်” “အားပြီးတော့မယ် သဇင်လည်းအားးဟားးပြီးပြီ..အား” သဇင်ပြီးသလိုကိုပြည့်လည်းသုတ်တွေပန်း ထုတ်ရင်းနောက်ထပ်အချက်ငါးဆယ်လောက်ထပ်လိုးပြီး “အားးကောင်းလိုက်တာသဇင်ရယ် အိုးးးဟားးး” နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူနီးပါးပြီးသွားလို့ကာမအရသာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲနေ့က သဇင်နှင့်ကိုပြည့်နောက်တကြိမ်ထပ်လိုးကြပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ကျမလိုးတဲ့အရသာကြိုက်ခဲ့ပြီလေ။
နောက်ထပ်လည်းသုံးလတကြိမ်လောက်ကိုပြည့်နှင့်တွေ့ရင်းလိုးကြခဲ့သေးတယ်။အနည်းဆုံးလေးကြိမ်လောက်လိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြာလာတော့သူကသဇင့်ကိုလက်ထပ်မယ့်အရိပ်အယောင်တောင်မပြဘူး။သဇင်လည်းမတောင်းဆိုပါဘူး။သူသဇင်နဲ့လက်ထပ်ရင်သူလည်းအလုပ်ပြုတ်မယ်။သူ့မိန်းမကတိုင်ရင်ထောင်ကျမယ်။သဇင်သူ့ဘဝကိုနားလည်ပေးတယ်။ သူ့နဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်မှာသဇင်စာတွေဖတ်ရင်းသဘောပေါက်လာတာက။ငါအချစ်ကိုကိုးကွယ်နေရင်ငါတော့ကီပင်ဘဝမှာပဲလူမသိသူမသိနေရတော့မယ်ဆိုပြီးသဘောပေါက်လာတယ်လေ။အဲဒါကြောင့် သဇင်သူ့ကိုမေ့ဖို့ကြိုးစားရင်းစင်္ကာပူမှာအလုပ်ထွက်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်အခုထိမေ့မရဘူးလေ။နောက်တော့မြန်မာပြည်ပြန်လာရင်း Seaman ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကျော်နဲ့တွေ့ပြီး၊လက်ထပ်ခဲ့တယ်ကိုကိုကျော်ဆိုတာကသင်္ဘောသားဝင်ငွေကောင်းတယ်ကိုယ့်အပေါ်လည်းအမြဲချစ်ပေးနိုင်မည့်သူမို့လို့သဇင်ရွေးခဲ့တယ်။
သူကကမ္ဘာပတ်နေတဲ့လူမလိုးဖူးဘူးကြိုက်သလိုပြောယုံရတာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့ကမဆော့ဘူးဆိုရင်တောင်မျောက်လောက်တော့ရှိတယ်လို့ထင်ထားတာလေ။ ဒါနှင့်ညကိုးနာရီလောက်ကိုကိုကျော်ရောက်လာပြီး “ဒေါက် ..ဒေါက် သဇင်ရေ” “ဟုတ်ကိုကို မူးလာပြီလား” “အင်းနည်းနည်းတော့မူးသွားတယ်ချစ်” “အင်းပါ နောက်အများကြီးမသောက်နှင့်နှော်” “အင်းပါချစ်ကလည်း” သူမူးနေရင်သဇင်အတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ။သဇင်ပလီလို့ရတယ် “စားပြီးပြီးလားသဇင်” “အင်း စားပြီးပြီလေ အချိန်လည်းကြည့်ဦး” “အင်းအာဆိုလည်းအိပ်ရအောင်” “အမ် ကိုကိုကလည်းအဝတ်အစားလဲဦးလေ” “အင်းပါ ကွာ” “ရော့ဒီမှာလဲရမယ့်အဝတ်တွေ””အင်းပါကွာ”သဇင်လည်းရေချိုးခန်းထဲအရင်ဝင်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်။မင်္ဂလာဦးညနံစော်နေလို့မှမဖြစ်တာ။ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတော့ကိုကိုကျော်အဝတ်အစားလဲပြီးကုတင်ပေါ်လှဲနေပြီ။
သဇင်လည်းကိုကိုကျော့်အဝတ်တွေခေါက်သိမ်းပြီးမီးပိတ်လိုက်တယ် “ချစ် ဘာလို့မီးပိတ်တာလဲကွာ” “သဇင်ရှက်လို့ပါကိုကို” အဓိကပြသနာကိုဖြေရှင်းရဖို့ကမီးပိတ်ထားဖို့လိုတယ်” သဇင်ကုတင်ပေါ်တက်ပြီးအိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်တယ်ဆိုရုံပဲကိုကိုကျော်ကလှမ်းဖက်တယ် “အင့် ကိုကို သဇင်တမျိူးကြီးပဲ” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ” “ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသလိုမောနေသလို ကြီး”ကိုကိုကျော်လေသဇင်ရင်ဘတ်ကြီးကိုစမ်းတယ်။သဇင်ရင်တွေတုန်နေတယ်။ရင်တုန်တာကဒီလိုလေ သဇင်အဖြစ်တွေရိပ်မိမှာလည်းစိုးသလိုကိုကိုကျော်ဆီလည်းအလိုးခံရတော့မှာကြောင့်ပေါ့ “ဟဲဟဲ ကြောက်နေလားသဇင်” “အင်းကြောက်တယ်အဲဒါကြီးကအရမ်းနာတယ်ဆို” “မနာဘူးချစ်ကလဲ” “အင်းပါ မနာအောင်လုပ်ပေး” “အင်းပါကွာ” ကိုကိုကျော်သဇင်နို့တွေကိုပွတ်နေတာ။ သဇင်မှာဖီးလ်တမျိုးပေါ့ပြီးတော့အဖုတ်ထဲလက်သွင်း ပြီးပွတ်တော့လူလည်းတုန်တက်သလိုဖြစ်သွား ပြီး “ဟင့်ယားတယ်ကိုကိုရဲ့”။
ကိုကိုကျော်သဇင့်နိူ့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့နေတယ်”အာ့အင့်ယားတယ်အင့်ဟင့်အင်း”တကယ့်အပျိုစင်တစ်ယောက်လိုပြုမူရတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိပိကအရည်တွေထွက်လာတယ်။နို့ကိုစို့ပြီးပိပိကိုလာနမ်းတော့တာပဲ။ “အာ့ကိုကို မလုပ်နဲ့လေ သဇင်ငရဲကြီးပါ့မယ်” “ကြီးပါဘူးသဇင်ကလည်း ကိုကိုကို့လည်းပြန်လုပ်ပေးလေ” “အင်း ကိုကိုသဇင်မလုပ်ရဲဘူး” “လင်မယားဖြစ်နေပြီ ရွံ့လို့လားသဇင်” “ဟင့်အင်း အခုလုပ်ရဲသေးဘူးကွာ” “ဒါဆိုနောက်လုပ်ပေးလေ” “ဟုတ်ကဲ့ ပါကိုကို” ကိုကိုကျော်ပြောပြီးရော ပိပိကိုယက်တော့တာပါပဲ ‘”ဟင့် အင်းးဟင်းးးဟင်းးဟီးး အာ့ ဟင့်အင့်” သဇင်လည်းအယက်မခံရတာကြာပြီမို့အရသာအရမ်းရှိနေတယ်။သူကသိပ်ပြီးအကျွမ်းကျင် ကြီးမဟုတ်ဘူး၊ဒီနေရာမှာကိုပြည့်ကပိုကျွမ်းကျင်တယ်လေ။ သဇင်စိတ်ထဲကိုပြည့်ကိုသတိရမိတယ်။မေ့ထားချင်ပေမယ့်မေ့မရဘူးလေ။အချစ်ဦးမို့လား တော့သိပါဘူး။ရင်ထဲတနေရာမှာသူရှိနေတယ်။
ကိုကိုကအစေ့ဖူးလေးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ် “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အားးးနေမရတော့ဘူး.အားး အင့်ဟင့်ဟင့်” “အာ့ရှီးရှီး အားးကိုကို အိုးး” “သဇင်ကိုကို့လီးကိုင်ပေးပါလား” အင်းကိုင်ပေးမယ်လေ” သဇင်အတွေ့အကြုံမရှိသူလိုတွန့်တွန့်လုပ်ပြီးကိုင်လိုက်တယ်။စမ်းကြည့်တော့ကိုပြည့်လီးထက်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ် “အားကိုကို အကြီးကြီးပဲ” “ဟင် သဇင်ကဘယ်သူ့ဟာမြင်ဖူးလို့လဲ” “ကလေးတွေဟာ” “ဟားးးသဇင်ကလည်းကိုကိုကလူကြီးဖြစ်နေပြီလေ” “လူကြီးတော့အဲဒါကြီးလာတာလားဟင်” အင်းလေ” ကိုကိုသဇင်ခံနိုင်ပါ့မလားဟင်ကြောက်တယ်”အမှန်လည်းကြောက်မိတယ်။ ဒီလီးနှင့်ဆိုသဇင်အဖုတ်တော့စုပ်ပြတ်သွားနိုင်တယ် “ဟင်းးးမတော်လို့ပြန်အမ်းရတာမရှိပါဘူးသဇင်ရယ်” “ကိုကိုဖြေးဖြေးလုပ်နှော်” “အင်းပါသဇင်ရဲ့” သဇင့်ပေါင်ကြားကို ..ကိုကိုကျော်ဒူးထောက်ဝင်လာပြီးပိပိကိုစမ်းကာလီးနှင့်တေ့ပြီးကိုကိုကျော်ဖိသွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ် ဗြိ ဗြိ ဗျစ်” “အာ့ အမလေး အိုးးးသေပါပြီ၊ကိုကိုအားးးး”။
“ကိုကိုသဇင်ဟာကွဲပါပြီ အားးး” “သွေးတွေများထွက်ကုန်ပြီလားမသိဘူး” “ကိုကိုမီးထွန်းလိုက်မယ်” “အာ မထွန်းနဲ့ရှက်တယ် ကွာ”အမှန်လည်းနာတယ်သူ့လီးကကြီးတယ်လေ။ဒါပေမယ့်ပိုအော်ပြတာလေ။သားအိမ်ကျဉ်းဆေးရဲ့အာနိသင်ကအစွမ်းပြတယ်။အရမ်းလည်းကျပ်တယ်။အပျိုစင်တစ်ယောက်ဒီလိုလီးကြီးနှင့်တွေ့တော့အဲလောက်တော့အော်ပေးရမယ်မှန်းသဇင်သိတဲ့အတွက်ပိုအော်လိုက်တာပါ “”ဗျစ် ဖြစ် ဖြစ်ဗြစ် ဘွတ် ဖတ်ဖတ်” “အိုးအမလေးးအားးဟားးဟားး” လီးကြီးကအဖုတ်ထဲတိုးဝင်လိုက်တိုးထွက်လိုက်နဲ့ခံရဆိုးတယ်။ကောင်းတာထက်နာကျင်နေတယ်။ “”ဗျစ် ဖြစ် ဖြစ်ဗြစ် ဘွတ် ဖတ်ဖတ်ဖန်းဖန်း” “အိုးအမလေးးအားးအင်းဟင်းဟင်း” ငါးမိနစ်လောက်ကိုကိုကျော်လိုးတော့ နာကျင်မှု့တွေပျောက်ပြီးဖီးကကောင်းလာ တယ်။ကိုကိုကျော်ဆီကမောဟိုက်သံလည်းထွက်လာတယ်” “”ဗျစ် ဖြစ် ဖြစ်ဗြစ် ဘွတ် ဖတ်ဖတ်ဖန်းဖန်း” “အင့်ဟင်းဟင်းးရှီးရှီးးး”။
သိပ်မကြာပါဘူးပူနွေးတဲ့သုတ်တွေသားအိမ်ထဲပန်းထွက်လာတော့ကိုကိုကျော်တစ်ယောက်ပြီးသွားပြီးသဇင်ဘေးမှာ လှဲချလိုက်တယ်။သဇင်မှာမပြီးဘူး၊ကိုပြည်နှင့်ဆိုသူတကြိမ်မှာသဇင်နှစ်ကြိမ်ပြီးတယ်၊အခုတော့ကိုကိုကျော်ကမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ အရသာသိဖူးနေတဲ့သဇင် အခုလိုမျိုးမပြီးတော့စိတ်ထဲကိုကိုကျော်ကိုသတိရတယ်။ “သဇင်ကိုကိုပြီးသွားပြီ” “ဟုတ်ကိုကို အဲဒါဆိုအိပ်တော့နှော်ကိုကို” “အင်း အိပ်ကြမယ်လေ” ဒီလိုနှင့်မင်္ဂလာဦးညကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်မင်္ဂလာဦးညပြီးဆုံးပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့သဇင်နာကျင်မှု့ကိုမခံစားရဘူး။ကိုကိုကပထဆုံးရက်မို့လို့ကြာကြာမလိုးနိုင်ဘူးထင်ခဲ့တာ။နောက်ရက်တွေလည်းကြာကြာမလိုးနိုင်ဘူးလေ။ဒီတော့ကိုပြည့်နဲ့လိုးတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့သဇင်အတွက်ကျေနပ်မှု့ကသိပ်မရဘူး။ကြာလေအဲဒုက္ခကကြီးမားလေပါပဲ။လီးကြီးရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာအလကားပဲဆိုတာသဇင်သဘောပေါက်တယ်။တကယ်တန်းကျတော့ကြာကြာလိုးနိုင်လေအရသာရှိလေပါပဲလေ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အိမ်မှာလူတွေရှိလို့များဖြစ်နေလားပေါ့။ခရီးထွက်ဟိုတယ်မှာလိုးလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ဒီကြားထဲဖုန်းကဝင်လာတယ်။ကိုပြည့်ဖုန်းနံပါတ်မို့ကိုကိုမသိအောင်အပြင်ထွက်ပြီးစကားပြောရတယ် “ဟလို” “သဇင်လားကိုပြည့်ပါ” “ဟုတ်ကိုပြည့်” “ဘယ်လိုလဲသဇင် ကိုပြည့်ကိုမေ့သွားပြီလား” “”အောကိုပြည့်ဒီအချိန်မှာ ဒီစကားမပြောသင့်ဘူးထင်တယ်” “ကို အရမ်းလွမ်းလို့ပါကွာ” “ကိုပြည့် သဇင်အိမ်ထောင်ကျနေပြီ” “ကိုသိပါတယ်သဇင်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” “ကိုပြည့်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဘူးကွာ” “အဆင်ပြေအောင်ညှိပါကိုပြည့်” “အချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကအဆင်မပြေဘူးလေ” “ဟုတ် ..ဒါပေမယ့်ကလေးတွေတောင်ရှစ်တန်းလောက်ရောက်ပြီမလား” “အင်း အဲကိစ္စတွေလည်းစိတ်ညစ်နေတာပဲ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုပြည့်” “ဒီကောင်အရမ်းဆိုးတယ် အိမ်ကကျနော်အပေါ်ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်။ အခုစာမေးပွဲကျတယ်ဗျာ၊ကျနော့်ကိုမပြောဘူး လူရာမသွင်းကြဘူး။
အခုကျနော်တပ်ရင်းမှူးဖြစ်နေပြီ” “အော်..ကိုပြည့်မိသားစုကိုလည်းဂရုစိုက်ပေး ပါရှင်” “ဟုတ်ကဲ့၊ဒါပေမယ့်ကျနော်စိတ်ကသဇင့်ဆီမှာပဲရောက်နေတယ်” “အာ ကိုပြည့်တော်ပြီနှော် အိမ်မှာကိုကိုရှိတယ်” ကျမဖုန်းချလိုက်တယ်။ “မိန်းမရေ ဘယ်သုဆက်တာလဲ” အသိတစ်ယောက်ပါကိုကို” အ်ာအေးအေးမိန်းမ”ကျမယောက်ကျားကိုကိုကျော်ကျမကိုချစ်တယ်။ကျမချစ်ဖူးတဲ့ကိုပြည့်ကိုမေ့မရပေမယ့်ကျမမေ့နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လေ။ကိုကိုလည်းသင်္ဘောမတက်ခင်ကြိုးစားလိုက်တာကျမကိုယ်ဝန်သာရသွားတယ်။လိုးတဲ့အချိန်တစ်ခါမှမပြီးဘူး။ကိုကိုသင်္ဘောတက်သွားတယ်။ သင်္ဘောပေါ်ကတော့အင်တာနက်သုံးလို့ရတော့ စကားပြောလို့တော့ရတယ်။သူသင်္ဘောမဆင်းခင်မှာပဲ ကလေးမွေးတယ်။အိမ်မှာအဖော်ရအောင်မေမေ့ကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်။ဒီကြားထဲမှာကိုပြည့်ဆီကဖုန်းခဏခဏလာတယ်။သူ့အကြောင်းတွေသူ့မိသားစုအကြောင်းတွေပဲပြောပြောနေတယ်။သူကအပြင်မှာတွေ့ဖို့ခေါ်တယ်။
တစ်ခါတစ်ခါဖုန်းဆက်ပြီးဂစ်တာတွေတီးပြသေးတယ်။အပြင်မှာတွေ့ချင်ကြောင်းလည်းလည်းပြောတယ်။ကျမမသွားဘူးကျမမိသားစုအတွက်မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးကိုကိုကျော်အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ကျမသစ္စာရှိသင့်တယ်။ကျမဘဝမှာလင်ယောက်ျားအပေါ်တစ်ခါလိမ်ညာပြီးပြီ။အပျိုစင်မဟုတ်ပဲအပျိုစင်လို့လိမ်ခဲ့တယ်။ယောက်ကျားရပြီးကျမမဖောက်ပြန်သင့်ဘူးလေ။အခုလဲကိုကိုကျော်သင်္ဘောကဆင်းပြီးပြန်လာတယ်။ကျမသွားကြိုတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုးရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျမစိတ်တွေထတယ်။ ကိုကိုလည်းအဲအတိုင်းပါပဲ။အခုတော့ကိုကိုကျော်လီးကိုကျမ အားရပါးရစုပ်တတ်နေပြီ။သူ့လီးကကြီးတော့စုပ်ရတာသိပ်အဆင်မပြေဘူး။အသံမထွက်အောင်ပဲယက်ပေးရတယ်။အိမ်မှာလည်းမေမေရှိတော့မေမေကြားမှာစိုးရသေးသလိုကလေးနိုးမှာလည်းစိုးရိမ်ရတယ်။အာ့မိုအသံမထွက်အောင်အသာလေးကြိတ်ရတယ်။ကိုကိလည်းကျမအဖုတ်ယက်ပေးတယ်။အရမ်းစိတ်ကြွနေလို့အော်ရမှာကို တောင် ကြိတ်အော်ညည်းမိတယ်။
“ကဲ မိန်းမ လိုးချင်ပြီ” “လိုးလေကိုကိုဘယ်လိုနေပေးရမလဲ” “ကုန်းပေးကွာ” “ဟုတ်ကဲ့ ” ကုန်းပေးတော့နောက်ကနေပြီးကိုကိုကျော်ဒူးထောက်လိုးတယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြစ် ဘွတ်” “အာ့ အိုး နာလိုက်တာ ကိုကို”မလိုးရတာကိုးလလောက်မှာသဇင့်အဖုတ်ပြန်ကျဉ်းသလိုဖြစ်ပြီးအရမ်းနာတယ်။အဖုတ်ထဲကလည်းအရမ်းညှစ်ထားသလိုဖြစ်တော့ အရမ်းလည်းကြပ်တယ်။အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေလည်းပြဲကုန်သလိုတောင်ဖြစ်တယ် “ဇွိ ဗျိ ဗြိ ဗြစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ်ဖန်းဖန်း” “အာ့အင်းဟင်းးဟင်း”လိုးချက်ကအရမ်းကြီးမပြင်းထန်ဘူးကြိတ်လိုးနေရတာပါ။ဒါပေမယ့်ဖီးကတော့အရမ်းရှိနေတယ်။ “ဇွတ် ဖွတ်.. ဘွတ်ဖတ် ဖတ်ဖန်းဖန်း” “အာ့ အိုး..အင်းဟင်းးဟင်းးး” ကိုကိုကျော် ရှစ်မိနစ်လောက်ပဲဆောင့်နိုင်တယ် “အာ့ အိုး..အင်းဟင်းးဟင်းးးအာ့ရှီးရှီး” ကျမပြီးတော့မယ် “အားရှီးရှီးဖွတ်ဘွတ်ဖတ်ဖတ်”ကိုကိုကျော်လိုးနေရင်းကရပ်လိုက်ပြီးကျမအဖုတ်ထဲသုတ်တွေပန်းထည့်တယ်။
“အားးမိန်းမရေကောင်းလိုက်တာကွာကိုကိုပြီးသွားပြီ” ကိုကိုကျော်ပြီးပေမယ့်သဇင်မှာ့မှာတို့လို့တန်းလန်းနှင့်ကျန်ခဲ့တယ်။သဇင်စိတ်ညစ်မိတယ်။ ပြီးတဲ့အရသာခံစားဖူးတဲ့သဇင်လေ အခုလိုမျိုးဖြစ်နေရတော့စိတ်ညစ်တယ်။ကိုကိုကျော်သင်္ဘောတက်သွားပြီးပြန်လာရင်ပထမ နေ့ကတော့အမြဲနာကျင်ရတယ်။နောက်ရက် တွေတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ ကိုကိုကျော်အိမ်မှာရောက်နေတုန်းကိုပြည့်ဆီကဖုန်းခဏခဏလာတယ်။လာတိုင်းလည်းအ ပြင်ထွက်ပြီးပြောနေရတော့ကိုကိုကျော်ရိပ်မိလာပြီ။မပြောသာမပြောပေမယ့်သူသိတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာထားကပြနေပြီ။ကိုပြည့်ကလည်းသူ့အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေကြောင်းပဲပြောနေ တယ်။သဇင်ကိုလည်းချစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းအမြဲပြောတယ်။တနေ့တော့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် “ဟလို သဇင်’” “ပြောပါကိုပြည့်” “သဇင်စိမ်းကားလှချည်လားကွာ၊ကိုပြည့်ရင်ထဲမချိအောင်” “ကိုပြည့်..သဇင်တို့နောက်မဆက်သွယ်တာ ကောင်းလိမ့်မယ်” “သဇင်ရယ် ကိုပြည့် သဇင့်ကိုချစ်နေဆဲပါ”။
“ကိုပြည့် သဇင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အရင်ကတည်းက လက်ထပ်ယူသင့်တယ်” “ကို့.ဘဝကအဲလောက်မျက်နှာသာမပေးဘူး လေ” “ဒီမှာ ကိုပြည့် ရှင်ကတော့ရှင့်ဘဝအတွက်မစွန့်စားရဲဘူး၊ကျမကတော့ရှင့်ကိုချစ်ခဲ့လို့ကျမဘဝအပျိုစင်ကို ပေးဆပ်ခဲ့တယ်ရှက့်စိတ်တိုင်းကျအသုံးတော်ခံခဲ့တယ်” “ကို တကယ်ချစ်တာပါသဇင်” “ရှင့်အချစ်ကြောင့်သဇင့်ဘဝကီပင်မဖြစ် အောင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတယ်၊ရှင်တော်လောက်ပြီ” “သဇင်ရယ်” “ကိုပြည့် အရင်က သဇင်ကအပျိုလေ ၊ကျမရှင့်ကိုချစ်လို့ရှင်ချိန်းသမျှကျမလာခဲ့ တယ်။ကျမအခုအိမ်ထောင်ကျပြီးကလေးတောင်ရပြီ။ရှင်မပတ်သက်သင့်တော့ဘူး” “ကိုအရမ်းသတိရလို့ပြောမိတာပါ” “ဟင့်အင်း ကိုပြည့် ရှင် သဇင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သဇင့်ဘဝကိုစာနာ ပေးလေ” “သဇင် ရယ်မင်းလည်းကိုပြည့်နှင့်အတူပျော်ခဲ့ကြတာပဲလေ” အဲဒါတွေအတိတ်မှာထားခဲ့တော့ကိုပြည့်” “အင်းပါ သဇင်ကိုအမြဲချစ်နေမှာပါ” သဇင်ဖုန်းချလိုက်တယ်။စီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေသုတ်ပြီးမိသားစုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမယ့်။သဇင့်အချစ်ကတခြားဆီမှာပါ။ သဇင်လိုအဖြစ်မျိုးရှောင်ရှားနိုင်စေဖို့ အားလုံးကိုလေးစားလျက် ………ပြီးပါပြီ။
ဆရာမ နာမည်က ကြည်ပြာ..ကျတော့တို့ရွာကို လာပြီး မူလတန်းကိုလာရောက်စာသင်ပေးသော..ရပ်ရွာခန့်..ဆရာမ.တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကျတော့အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ နေထိုင်ရန် ရပ်ရွာက သတ်မှတ်ထားပါသည်။ဆရာမကြည်ပြာက. အသားကဖြူဖြူ…အရပ်ကနဲနဲပုတယ်…ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးခွက်ပြီး ..သွားလေးတွေက ဖြူဖွေးနေတာပဲ…ဆရာမဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ရင်..အရမ်းကို ကျက်သရေရှိ လှပတဲ့သူပါ…လှမ်းလျှောက်ရင်လည်း..ညင်ညင်သာသာလေး လှမ်းလျှောက်တက်ပြီး…ဘေးတိုက်တုန်ခါတဲ့..တင်သားများမဟုတ်ဘဲ…အပေါ်အောက်..လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်။သူနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးပေမယ့်လည်း…ကျတော့အတွက်မှန်းထုစရာ..စိတ်ကူးရင် မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါသည်။.မှန်းထုစရာ အကြောင်းအရာတွေကလည်းရှိတယ်လေ…မိုးလင်းလို့ သေးပေါက်ရင် အိမ်သာပေါ်မတက်ပဲ…အိမ်သာရှေ့မှာ..ထမိန်လှန်သေးပေါက်ခြင်း။ ရေချိုးရင် သူနေတဲ့အိမ်ခြေရင်းမှာ ချိုးတက်ခြင်း၊ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးပြန်လာရင် ရေချိုးတဲ့နေရာလေးမှာပဲ…ထမီလှန် ဓာတ်မီးထိုးသေးပေါက်ခြင်းတို့ဟာ..ကျတော့အတွက် ဆရာမကိုမှန်း…. ဂွင်းထုခြင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့…..အဲဒီအထဲကမှ..ကျတော်…ဂွင်းထုအရသာအရှိဆုံးက။မနက်ရေချိုးချိန်နှင့်ညနေရေချိုးချိန်ပဲ…ဆရာမကြည်ပြာ ရေတခါချိုးလျှင်အချိန်တော်တော်ကြာတယ်..နှံစပ်အောင်လည်းတစ်ကိုယ်လုံးပွတ် ချေးတွန်းတယ်….ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးတဲ့နေရာက ကျတော့အခန်းရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်…သူနေတဲ့အိမ်ရဲ့ခြေရင်းဘက်ကျတာပေါ့….တောရွာတွေဆိုတော့..ရေချိုးခန်းအကာတွေ..ဘာတွေ..မရှိဘူး..ရာဝင်အိုးနှင့်အဝတ်လျှော်စရာသစ်သားတစ်တုံးပဲရှိတယ်..ကျတော်ကဆင်းရဲတော့ ..ဝါးထရံကာအိမ်လေးနဲ့ပဲနေနိုင်ပါတယ်…ချောင်းကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်တော့ပြေတယ်…ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးမယ်..မြင်လိုက်တာနဲ့..ကျတော်အခန်းထဲပြေးဝင်တော့တာပဲ…။ ဆရာမရေချိုးရင်…ထမီအပိုတထည်ကို ဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ်တင်..ညာလက်ကဆပ်ပြာခြင်းကိုကိုင်ပြီး..ရေချိုးတဲ့နေရာကိုလာတယ်… ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့..ရေချိုးတာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်…ကဗျာကသီ အိမ်ခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်ပြီး..ချောင်းနေကျအပေါက်မှာနေရာယူလိုက်တယ်…ဆရာမကလည်း….ရာဝင်အိုးနားရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..ထမီကိုတန်းမှာတင်..ဆပ်ပြာခွက်.အောက်ချပြီး…ရေ လေးငါးခွက် ခေါင်းပေါ်ကနေဆက်တိုက်လောင်းချလိုက်တယ်..လျောကျနေတဲ့ထမီကို ပြန်ပြင်ဝတ်ပြီး နောက်ထပ်ရေလောင်းလိုက်တယ်..ပြီးတော့..မျက်နှာသစ်ဆေးရည်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်ပြီးမှသွားပွတ်တံပေါ်သွားတိုက်ဆေးကိုကုန်းပြီးညစ်နေတာလုပ်လိုက်တော့ တင်းပြီးကားထွက်နေတဲ့တင်ပါးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့. ကျတော့ငပဲက မရတော့ဖူး..ငေါက်ကနဲ့ဆို..ထောင်လာတော့တာပဲ…ဆက်ကြည့်နေတုန်း…ဆရာမက သွားတိုက်နေတာများ..။ အိုး..ရေစိုထမီကပ်နေတဲ့ တင်စိုင်ကြီးများက..လှုပ်ရမ်းနေတာပဲ….မနောသီချင်းတောင် သွားသတိရလိုက်သေးတယ်..ဘာတဲ့.”.အိုးလေးလှုပ်လိုက်ပါ” ဆိုတဲ့အတိုင်း…ရမ်းခါနေတာပဲ…ကျတော့လက်ကလည်းမရတော့ဖူး..လီးကိုပုဆိုးပေါ်မှကိုင်ပွတ်နေရပြီ…သွားတိုက်ပြီးတော့..ပလုတ်ကျင်းလိုက်..ကုန်းပြီးထွေးထုတ်လိုက်လုပ်နေတာများ..ကျတော့စိတ်ထဲမှာ ဆရာမက..ကုန်းပြီးကျတော့လီးကိုဆောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရောင်လာတော့ လီး ပိုတောင်လာတယ်…မရတော့ဘူး..ပုဆိုကိုဖြည်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်..လုပ်နေရပြီ..ပလုတ်ကျင်းပြီးသွားတော့..ရေထပ်လောင်း..ကျတော့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်…ထမီကိုခြုံတဲ့ပုံစံနဲ့..ဂျိုင်းတွေပွတ်..နို့တွေပွတ်..ဘယ်ညာချိန်းပြီး ထမီကိုကိုင်ရင်..ဝင်းမွတ်နေတဲ့.ရင်သားလေးတွေကို […]
ရှင်က..အဲလေ ကိုကို က အမြဲတမ်း ဒီလိုပဲ နောက်ကျတာချည်းပဲ “ဆွေ ကလည်းကွာ အလုပ်ကိစ္စတွေ မပြတ်လို့ပါ။ တစ်ခါတလေ စိတ်မဆိုးပဲ နေပါ့လား” ကျွန်တော် သူ့ဆံပင်အုံလေးကို မထိတထိ ဖွလိုက်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။ “အော် ကိုကိုရယ် စိတ်ဆိုးတာ ဝါသနာပါလို့ စိတ်ဆိုးနေတယ်များ ထင်လား။ စိတ်တိုရတာ စိတ်ဖိစီးတယ်ရှင့်။ တကယ်ပဲ ကိုကို နဲ့ ဆို ဆွေ အသက်တိုမယ်။ ဒေါသထွက်ရတာ” “အေးပါ ဆွေရယ်။ ဒီလို အမှတ်တရနေ့ဆိုတာ ရန်မဖြစ်ရဘူး။ လာ.. ဟိုဆိုင်လေးမှာ သွားထိုင်ရင်း ထောပတ်သီးဖျော်ရည်သောက်ကြမယ်။ ပြီးရင် ဟိုသွားမယ်” “ဟိုသွားတာက ဖြစ်ပါ့မလား ကိုကိုရယ်” ဆွေက ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း မဝံ့မရဲ ပြောတယ်။ သူရှက်နေတာလား မသိဘူး။ ဆွေ က […]
ကျွန်တော့ အဖေကအလုပ် ပြောင်းကျတော့ အရင်အိမ်ကိုရောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဒဂုံဘက်မှာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ဝယ်လိုက်တော့ အဲ့ဒီမှာနေရတယ် ။ ရန်ကုန်မှာက သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ ဘေးအခန်းမှာ ဘယ်သူနေမှန်းတောင် မသိကြဘူး ။ အဖေက အလုပ်နှင့် နယ်ကို ထွက်သလို ကျွန်တော်လည်း တက္ကသိုလ်တက်ရတယ် ။ တက္ကသိုလ်ကို ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းအသစ် သုံး ယောက် ရတယ် ။ ဖြူဖွေးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ရယ် ပိုးဟပ်ဖြူရယ် နေမျိုးရယ် ။ ကျွန်တော်တို့လေးယောက်က စားသောက်နောက်ကြရင်းနှင့် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်သွားကြတယ် ။ ဖြူဖွေးက အသားမည်းတယ်ဗျ ။ သူက ကုလားလေ သူ့အသားအရည်က မီးသွေးနုရောင်ဆိုတော့ သူ့ကို ချစ်စနိုးနှင့် ဖြူဖွေးခေါ်ကြတယ် ။ နောက်တစ်ယောက် ပိုးဟပ်ဖြူက တရုတ်ဗျ အသားတွေက […]